Faransiiska oo looga baroordiiqayo dadkii ku dhintay weerarkii Jimcihii - BBC News Somali
Faransiiska oo looga baroordiiqayo dadkii ku dhintay weerarkii Jimcihii
25 Maarso 2018
Image caption Baroor-diiqayaasha ayaa saakay isugu tegay kaniisad ku taalla Trèbes
Isu soo bax baroor-diiq ah ayaa lagu qabtay magaalada koofurta Faransiiska ku taalla ee Trèbes, kaas oo lagu xusuusanayo afar dhibbane oo nin hubeysan uu dilay Jimcihii.
Sarkaal booliis oo lagu magacaabo Arnaud Beltrame, kaas oo dhintay isagoo badbaadinaya nolosha la haystayaal ku sugnaa supermarket-kii la weeraray, ayaa sidoo kale lagu maamuusi doonaa baroor-diiq qaran oo maalmaha soo socda ka dhici doonta Paris.
Waxaa loo aqoonsaday geesi kaddib markii uu badbaadiyay dadkii meesha ku jiray.
Waa weerarkii ugu ba`naa ee dhaca tan iyo intii uu madaxweyne Emmanuel Macron xilka dalkaasi qabtay.
Ninkii hubeysnaa, oo ahaa 25-jir lagu magacaabo Redouane Lakdim, ayaa ku jiray liiska dadka mayalka adag waxaana loo aqoonsanaa dembiile, balse kooxaha sirdoonka ayaa u arkay inuusan ahayn qof khatar badan. Booliiska ayaa markii dambe toogtay.
Lakdim, oo sheegtay inuu ka tirsan yahay kooxda isku magacawday Dowladda Islaamka, ayaa la sheegay inuu codsaday sii deynta Salah Abdeslam, oo ka mid ah dadka lagu raad-joogo ee ka badbaaday weerarradii 13kii November 2015 ka dhacay Paris, kaas oo ay ku dhinteen 130 qof.
Weerarka ayaa ruxay magaaladaasi miyiga ah ee ay ku nool yihiin 5,000 oo qof, ubaxyo ayaana la hor dhigay dukaanka Super U oo ah halka ay mashaqadu ka dhacday.